Basonga ukudunga umcimbi kaNcwane - Ilanga News
Home Izindaba Basonga ukudunga umcimbi kaNcwane
Basonga ukudunga umcimbi kaNcwane
Abaculi bendawo bakhala ngokushiywa ngaphandle
SEKUQUBUKE umsindo ngedili lomculo we-gospel laminyaka yonke elihlelwa ngu-Ayanda Ncwane, oyinkosikazi kaSfiso Ncwane, ongasekho emhlabeni.
Kuneqeqebana labathile elisha-ya phansi ngonyawo, elithi ngeke wenzeke lo mcimbi, lisabisa ngokuthi lizowuvimba.
Lo mcimbi waminyaka yonke, obizwa ngokuthi yi-AfriGospel Unite Festival, uzobe wenzeka okwesihlanu kulo nyaka, ehholo elibizwa ngokuthi yiseSibusisiwe, eMandeni.
Udume ngokubophela izingwazi zabaculi be-gospel, okubalwa kubo nabaqhamuka kwamanye amazwe ase-Afrika. Kuhlelwe ukuthi lo mcimbi ube ngomhla ka-28 kule nyanga.
Leli qeqebana lihlangaisa nabaculi bendawo okuthiwa kabeneme ngalo mcimbi.
ILANGALangeSontolithole ukuthi sekusungu-lwe nekomidi eliyisipesheli elimele labo abanezikhalo. Leli komidi kuthiwa selike lazidlulisa izikhalo zalo mayelana nalo mcimbi kuMasipala waseMandeni. Okuhamba phambili ezikhalweni wukunga-qashwa kwabaculi baseMandeni namaphethelo ukuyonandisa kuleli dili.
UPhathabakhe Shezi, okuleli komidi, utshele ILANGALange-Sontoukuthi sekuneminyaka bekhala bengabaculi ngalo mci-mbi njengoba ungabenzeli lutho abaculi bakule ndawo.
“Sikhathele wukuxhashazwa ngalo mcimbi njengoba kudlalwa ngabaculi bendawo.
Uma befakwa (ukuba banandi-se) bayampintshiswa, bavolontiye ekubeni kunemali kahulumeni ekhishwayo uxhaswe, futhi abaqhamuka kwezinye izindawo bayakhokhelwa,” kusho uShezi.
Utshele leli phephandaba ukuthi kulo nyaka bazimisele ukwenza konke okusemandleni ukulwela ubulungiswa. “Uma zingatha-thelwa phezulu izikhalo zethu, nakanjani sizophoqeleka ukuthi kube khona esikwenzayo ukuze ungenzeki.
“Sesizame izikhawu uku-hlela umhlangano no-Ayanda Ncwane kodwa ungenzeki (lowo mhlangano). Sitshelwa izinto ezahlukene,” esho.
IKhansela elibhekelela izindaba zabantu abasha (Youth Affairs) kuMasipala waseMandeni, uNkz Zamile Mdletshe, lithe azikho izi-khalo zabaculi asebeke bazizwa bona.
Uthe lo mcimbi awuhlangene noMasipala njengoba u-Ayanda eziqashele ngokwakhe ihholo futhi engaxhasiwe ngumasipala.
“Lona wumcimbi weNcwane Communications ongahlangene nhlobo nathi. Ngakho akukho esi-ngakusho uma umuntu eziqashele ihholo ezenzela umcimbi wakhe,” kusho uNkz Mdletshe.
I-AfriGospel Unite Festival isinedumela eMandeni njengoba ibophela izintandokazi zabaculi baseNingizimu Afrika nasemazweni angomakhelwane.
Phakathi kwababoshelwe kulo nyaka kubalwa Abathandwa, Thinah Zungu, Jumbo, Ayanda Shange, Ayanda Ntanzi, Rebecca Malope, Kholeka, Hlengiwe Mhlaba, Batusile Mcinga, Shongwe, Tatenda Nahachi, Babo Ngcobo, Sbu Noah nabanye abaningi.
Imizamo yokuthola u-Aya-nda ukuze aphawule ngalolu daba iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa nomlayezo athunyelelwe wona yintatheli ngoWhatsApp engawuphe-ndulanga nakuba bekubonakala ukuthi u-online.
Previous articleUmlimi ugqugquzela imfundo emakhaya
Next articleKubonwa ngokusa kunogada odutshuliwe